२२ मंसिर, चितवन ।
२२ मंसिर, चितवन । चितवन क्षेत्रनम्बर तीनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनः अग्रता लिएका छन् । यसअघि उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवार विक्रम पाण्डेभन्दा पछि थिए ।
ताजा मत परिणामअनुसार प्रचण्डले १ हजार १ सय २८ मत ल्याएका छन् भने लोकतान्त्रिक गठवन्धनबाट उठेका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले १ हजार ३९ मत ल्याएका छन् ।
प्रचण्डलाई एमालेको र पाण्डेलाई कांग्रेसको समर्थन छ ।
लोपोन्मुख प्रजातिका वन्यजन्तुहरुको संरक्षण गर्न भन्दै चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्साको केही भाग समेट्दै विक्रम सम्वत् २०३० सालमा स्थापना गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भूभाग अहिले नौ सय ५२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । चार वटा जिल्लाको पाँच सय ४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर निकुञ्ज स्थापना गरिदा चितवनमा एक सय ४७ वटा गैंडा रहेका थिए । अवकास प्राप्त सेनाले गस्ती गरेपछि निकुञ्जमा गैंडाको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । अवकास प्राप्त सैनिकहरुबाट मात्रै गैंडाको सुरक्षा सम्भवन नभएपछि निकुञ्ज स्थापनाको दुई वर्ष पछाडि नै २०३२ सालबाट नेपाली सेनालाई गैंडा संरक्षणको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिचालन गरियो । निकुञ्ज स्थापनाको पाँच वर्षपछि २०३५ सालमा नै यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै नौ सय ३२ वर्ग किलोमिटर पु¥याइएको थियो । निकुञ्जको क्षेत्र विस्तारसँगै २०५३ सालमा आएर मध्यवर्ती क्षेत्र समेत घोषणा गरियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरी रहेका चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्साको सात सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरि निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई दिने व्यवस्था गरियो । यससँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षणमा ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको छ । गैंडा संरक्षणको लागि चुनौति पहिचान गरि नियमित गस्तीको काम सुरु गरेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चार पटक सम्म शून्य चोरी शिकारी नियन्त्रण वर्ष मनाएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा संरक्षणको लागि नेपाली सेनाले स्वीपिङ अप्रेसन, दैनिक पेट्रोलिङ, वासस्थान व्यवस्थापन, अप्रेशन महाहन्ट जस्ता कामहरु गर्दै आएको छ । निकुञ्जले सन् २०११ मा पहिलो पटक शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ मा शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाएको निकुञ्जले लगातार २०१५ र १६ मा समेत शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाउन सफल भयो । शून्य चोरी शिकारीमा निकुञ्ज, सेना र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
सरकारले निकुञ्जको वरिपरीको क्षेत्रलाई समेट्दै मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेसँगै वन्यजन्तु संरक्षणमा स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउन थालिएको छ । चोरी शिकारी नियन्त्रण युवा जागरण अभियान देखि विभिन्न अभियानका कारण निकुञ्ज प्रभावितहरु समेत वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा चासो दिँदै आएका छन् । चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि निकुञ्ज एक्लैको पयास सार्थक नहुने र यसका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
सेनाले निकुञ्जको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दा खेल्दै पनि उनीहरुको आँखा छलेर शिकारीहरुले गैंडा मार्दै आएका छन् । लगातार तेस्रो पटक शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाउने तयारीमा रहेको निकुञ्जमा मुख्यालय कसरा नजिकै गत चैत २५ गते राति गैंडा मारेपछि सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । २०७४ को वैशाख २० गते निकुञ्जले लगातार तेस्रो र समग्रमा पाँचौँ पटक शून्य चोरी शिकारी नियन्त्रण मनाउने तयारी गरिरहँदा जगतपुरमा गैंडा मारिएको थियो ।
चितवनको मतगणनाको अन्तिम तयारी
विहिबार सम्पन्न चितवनको मतगणनाको अन्तिम तयारी भएको छ । बिहान १० बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएको छ ।
तर, उम्मेदवारहरुले आफ्ना प्रतिनिधिको नामावली दिन ढिलाइ गरेकाले गणना सुरु हुन सकेको छैन । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उम्मेदवार रहेकाले धेरैको चासो छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुलप्रसाद शर्माका अनुसार चितवनका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना चितवन उच्च मावि भरतपुरमा हुँदैछ ।
गोर्खा क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हरीराज अधिकारी ३०,५० मतले अगाडि
मंसीर २३ ।
गोरखा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार हरी अधिकारीको अग्रता कायमै छ कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठले १४७१२
ल्याउदा माओवादी केन्द्रका हरिराज अधिकारी १७,७६२ मत ल्याएका छन् । ३६,७७१ मतगणना हुंदा अधिकारी ३०,५० मतले अगाडि छन् ।
चितवनमा मतगण्ना सुरु
चितवन, २२ मंसिर ।
चितवनमा मतगण्ना सुरु भएको छ । दिउसो १ बजेर ४१ मिनेट जादाँ मतागणना सुरु गरिएको हो । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट मतगणना शुरु गरिएको छ ।चितवन माविको भवनमा मतगणना सुरु गरिएको हो । । मतगणनास्थल भरतपुरको चितवन माविमा आवश्यक सिसी क्यामेरा, इन्टरनेट तथा बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ। तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा तीन लाख ५४ हजार ३६ मतदाता रहेको चितवनमा करिब ७० प्रतिशत मत खसेको छ ।
रुकुम पूर्वमा बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका कमला रोका विजयी
मंसीर २२ ।
रुकुम पूर्वमा बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका कमला रोका विजयी भएकी छन्। उनले १०४३४ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका हरिशंकर घर्तीले ४४०६ मत प्राप्त गरे।
त्यस्तै नयाँ शक्तिका जितमान पुनले १४८९ मत ल्याए। कूल खसेको १८११२ मतमध्ये १६४२४ सदर भएको र ११८८ बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दुर्गाबहादुर भुषालले बताए।
आगामी ५ बर्षमा १० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने संकल्प: कृष्णभक्त पोखरेल
चितवन क्षेत्र नं. २ बाट संयुक्त बाम गठबन्धनका प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले आगामी ५ बर्षमा १० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने संकल्प गरेका छन् । बिहिबार भएको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनमा भरतपुर स्थित नारायणी नमुना माविबाट मतदान गरेका छन् । पोखरेलले मतदानस्थल नारायणी नमुना माविको क मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरु संग बोल्दै क्षेत्र नं. २ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार पोखरेलले चितवनमा बामगठबन्धनका सबै उम्मेदवार बिजयी हुने दावी गरेका छन् । पोखरेलले जनताहरु बाम गठबन्धनलाई बिजयी गराउन आतुर रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन पछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको उनले वताए । उनले जनताको माया आफु प्रति केन्द्रीत भएकाले आफ्नो जित पक्का भएको दावी गरे । घरदैलो गर्दा जनताले दिएको बाचा र स्थानीय तहमा आफ्नो पक्षधरको जितको आधारमा पनि आफुले चितवन क्षेत्र नं. २ को चुनाव जित्ने बताए । यस अघिको संविधान सभाको निर्वाचनमा समेत भारी मतका साथ जनताले आफुलाई बिजयी गराएको स्मरण गर्दै पोखरलेले यो पटक पनि निर्वाचनको नजिता आफ्नो पक्षमा आउने दावी गरे । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरि प्रतिव्यक्ति आय बढाइने उनले जानकारी दिए । अबको कसैको विरोध नगरि नवनिर्माणको मुद्धामा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष समेत रहेका नेता पोखरले यस अघिको संविधान सभा सदस्यका लागि सोही मतदान स्थलबाट मतदान गरेका थिए । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा उनी तत्कालिन क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।